GUARD, Teraka ho Niavaka
Manomboka amin'ny Manhattan ka hatrany amin'ny Sydney Opera House ka hatrany amin'ny Shimao Cloud, ary mankao aminay, amin'ny maha-vaovao azy amin'ny vokatra varavarana sy varavarankely, dia nanaporofo ny tenany hatrany hatrany ny varavarana fitaratra manify tao anatin'ny folo taona taorian'ny nahaterahany. Ity vokatra vaovao miavaka amin'ny varavarana ity dia mivoatra tsikelikely avy amin'ny vaovao mankany amin'ny cla ...
YALIS Glass Varavarana Hidin-trano mamaritra ny tena fiainana mahafinaritra
Kanto Avy amin'ny fanoloran-tena ho amin'ny antsipiriany Fifadian-kanina Avy amin'ny fitiavana ny fiainana Avy amin'ny fanaraha-maso ny antsipiriany Ny toetra miavaka, ny tsy nampoizina tsy nisy hatrizay Famaritana ny fiainana mahafinaritra Ny fitaovana Ny fahaiza-manao dia avy amin'ny fitaovana avo lenta YALIS GUARD andian-dahatsoratra fitaratra na hidy vita amin'ny...
Fotoana Fampisehoana vokatra Vaovao | CHEETAH & Artware
Misy lafin-javatra maro samihafa eo amin’ny fiainana, izay tena mahafa-po, tsy miova, na zava-baovao sy mahaliana. Mifidy ny tsy ho voafandriky ny fivoriambe na oviana na oviana isika, hanimba ny sary an-tsaina, ary hanampy zavatra ara-javakanto eo amin'ny fiainantsika. Teraka ny tantana varavarana YALIS, CHEETAH. Mahazo ny i...
Amin'ny maha mpanamboatra matihanina manana traikefa 12 taona amin'ny hardware varavarana, YALIS dia mpanamboatra lehibe amin'ny fitaovana varavarana minimalista, ary ny mpamorona ny endriny dia ireo mpamorona izay manome ny vokatra ho endrika sy fanahy. Androany dia sambatra isika manasa an'i Hanson Lia...
Sasin-teny: Ny korontana nateraky ny COVID-19 dia nahatonga ny orinasa tsy hifindra mankany amin'ny hazavana amin'ny faran'ny tonelina intsony, fa mitsapatsapa ao anatin'ny zavona mba hitady lalana hivoahana. —— nataon'ny Antenimieran'ny varotra eoropeanina any Sina Tamin'ny fiandohan'ny taona 2020, nipoaka ny COVID-19. Amin'izao fotoana izao, ny valan'aretina maneran-tany dia...
Hetsika Diabe Lohataona YALIS
Tamin'ny 12 Mey, nitsidika ny Zhongshan Diyin Resort ny ekipan'ny YALIS. Jereo ny nataon'izy ireo tany! Miaraka amin'ny toetr'andro tsara, nanao hetsika dia an-tongotra lohataona i YALIS. Ny 12 May,...
Inona no ataontsika mandritra ny vanim-potoanan'ny fihanaky ny COVID-19
Fanavaozana Vaovao Vaovao Fahasitranan'ny Coronavirus: Tamin'ny 19 febroary, nanambara ny governemanta Shinoa fa hiverina hiasa tsikelikely ny orinasa rehetra vao haingana. Ny mpiasan'ny YALIS (samy birao na sampana famokarana) dia hiverina hiasa avokoa amin'ny 24 Feb. Nanao fanamarihana ambony momba ny coronavirus i Shina rehefa misokatra indray ny orinasa,…
Tamin'ny 24 Febroary, toy ny fanao amin'ny fanokafana azy indray aorian'ny taom-baovaon'ny volana, dia nitazona dragona lamba lava teny ambony hazo ireo mpanakanto ary nandihy tamin'ny feon'ny ampongatapaka, nanantena ny hitondra harena ho an'ny mpiasan'ny YALIS isan'andro. Tsy fotoana mahazatra anefa izao. ...